Ankadivoribe- Atsimondrano: tokony ho vita amin’ny 2019 ny sinibendrano | NewsMada
Ankadivoribe- Atsimondrano: tokony ho vita amin’ny 2019 ny sinibendrano
Mikaikaika ny mpanjifa! Tsy ampy ny famatsian-drano eto an-dRenivohitra, indrindra amin’ny antoandro. Toraka izany koa ny eny amin’ny faritr’Itaosy manontolo sy ny eny Atsimondrano. Ho an’ity farany, nanomboka ny taona 2017 ny fananganana sinibendrano vaovao eny Ankadivoribe, toy ny efa vita eny Faralaza Talatamaty (mamatsy an’Ivato sy ny manodidina), sy ny eny Sabotsy Namehana mamatsy an’Avaradrano. Na voalaza fa efa vita 90% aza ny eny Ankadivoribe, tsy mbola miasa izany, ankehitriny. “Nisy tokoa ny olana ara-teknika, fa efa voavaha izany ary tokony ho vita amin’ny taona 2019 ny asa”, hoy ny tale jeneralin’ny Jirama, ny herinandro lasa teo.
Olona maherin’ny 50.000
Marihina fa avy eny amin’ny tobin’ny Jirama Mandroseza ny rano mamatsy ny faritra atsimon’ny Renivohitra. Tsy maharaka intsony anefa ny fotodrafitrasa ny fantson-drano hatreo Andoharanofotsy, ka mahatonga ny eny Bongatsara, Amboanjobe sy ny manodidina tsy hahazo rano intsony amin’izao fotoana izao.
Manana tanjaka, mamoaka rano 120 m3/ora ity sinibendrano vaovao eny Ankadivoribe ity, nandaniana 6 miliara Ar. Hamatsy rano ny eny Ankadivoribe, Amboanjobe, Iavoloha, Mahalavolona, Bongatsara, Mandriamena, sns. Maherin’ny 50.000 ny olona hahazo tombontsoa aminy.
Tsy nahavaha olana ny 900 m3/ora
Etsy ankilany, na efa vita ny taona 2017 aza ny toby famatsian-drano faharoa eny Mandroseza, tsy mivaha ny olan’ny famatsian-drano ho an’ny faritra andrefana, indrindra manomboka eo Anosizato, Ampitatafika, indrindra ny eny Itaosy anisan’ny tena midadasika. Efa nitombo ho 3.900 m3/ora ny rano vokarina eny Mandroseza I sy II, raha 3.000 m3/ora tany am-piandohana. Olona manodidina ny 100.000 ny voalaza fa hahazo tombontsoa amin’io 900 m3/ora io, saingy tsy hita soritra izany amin’ny ankapobeny, indrindra ny eny Itaosy sy ny manodidina.